Halgankii Sayid Maxamed Cabdille Xasan | Voice Of Somalia
Ciidamadii Ingiriiska dagaal ayey ku soo qaadeen ciidamada Sayidka markii taariikhdu ahayd Abriil 1901kii, waxaana dagaalkaas loo yiqiin dagaalkii Afbakeyle, goobtaasi waxay 40 mayl galbeed ka xigtaa magaallada Laascaanood. Halkaas waxaa ka dhacay dagaal culus oo dhimasho iyo dhaawacba geystay, waxaase libtii raacday Daraawiish oo ka adkaatay Ingiriis. Isla sanadkaas, Ingiriiska iyo Daraawiish, waxay isaga horyimaadeen dagaal kale oo ka dhacay meesha la yiraahdo Oodagooye oo u dhow Laascaanood, waxaa asna guuleystay ciidankii Daraawiishta. Sanadkii 1902dii ciidamada Daraawiishta oo ka koobnaa 15,000 oo nin, 12,000 oo ka mid ahi ay fardooley yihiin iyo 1,500 oo qoryo ku hubeysan, waxay mar seddexaad isku haleeleen ciidankii Ingiriiska meesha la yiraahdo Beerdhiga, halkaas oo khasaare ba’ani soo gaarey ciidankii Ingiriiska.
SAWIRO: Ninkii iibsaday dhulka iyo badda Somalia oo is sharaxay!